“Kulanka waxaa looga hadlayaa qodobo muhiim ah oo lagama maar maan u ah Dastuurka Dalka” – Kalfadhi
Magaalada Baydhabo maanta waxaa shir looga hadlayo Dastuurka uga furmay Agaasimeyaasha Guud ee Wasaardaha arrimaha Dastuurka Maamul Gobaleedyada Dalka, kaasi oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya.
Kulanka farsamo iyo isxog wareysiga ee Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha arrimaha Dastuurka ee Heer Federaal iyo Heer dowlad Gobaleed ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa muddada uu socdo iyo halka uu marayo geedi socodka Arrimaha Dastuurka, iyadoo laga wada tashan doono sidii loo dhameystiri lahaa Dastuurka Dalka.
Kulanka sidoo kale waxaa ka qeyb-gallaya xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka maamul-gobolleedka Koonfur-Galbeed.
Agaasimeyaasha Guud ee ka socday Wasaaradaha arrimaha Dastuurka ee Dawlad Gobaleedyada Dalka ayaa si aad ah u soo dhaweeyey shirkan ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya, iyagoo shirka ka rajeeyey in ay ka soo bixi doonaan qodobo wax ku ool ah.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Zubeer ayaa tilmaamay in muddada uu socdo shirka laga hadli doono qodobo muhiim ah oo lagama maar maan u ah dastuurka Dalka.
Intaasi kaddib waxaa shirka si toos ah u furay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Warsame Dhoofaan ayaa ka qeyb galiyaasha shirka ku adkeeyey in ay sifican uga doodaan ajandaha kulanka, ayna aragti mideysan ku darsadaan Dastuurka.